Shan talooyin si loo fududeeyo jumladahaaga
Ma jirto wax macno ah oo aad ku muujinayso aqoontaada luuqad joogta ah ama aadka u gaarka ah. Sida ugu fudud ee aad tahay, ayaa fiican. Sida iska cad, maaha isticmaalka qaab aan habboonayn. Laakin in la qaato jumladaha qeexan iyo in la yeesho ujeeddooyin kaliya: caddayn iyo saxsanaan.
Fududnaanta waxay keeni kartaa in la qaato eray-bixin cad oo "mawduuc - fal - dhammaystir". Mararka qaarkood rabitaanka lagu muujinayo in qofku garanayo leexashada kakan waxay keeni kartaa in la qoro jumlado aad u dheer. Tan laguma talinayo, sababtoo ah xaaladahan. Akhristuhu waxa uu aad ugu dheeraadaa in aanu lumin raad-raaciisa. Sidaa darteed, ku adkeyso isticmaalka jumlado gaagaaban intii suurtagal ah. Khiyaamada xiisaha leh ayaa ah in la muujiyo hal fikrad oo kali ah jumlad kasta.
Sharaxaada hal fikrad oo kali ah jumlad kasta waxay caawisaa in la caddeeyo. Haddaba, ma jiro madmadow ku jira dabeecadda walxaha ku jira jumladda. Ma dhici doonto in la isku jahawareeriyo mawduuca iyo shayga ama in la is weydiiyo yaa waxa sameeya. Isla sidaas oo kale waa run marka la ixtiraamo qaabeynta cutubka. Runtii, fikradda waa in si cad loo muujiyaa bilowga, jumlada koowaad. Jumladaha intiisa kale ayaa kaabi doona fikraddan. Dhab ahaantii, uma baahnid inaad ku abuurto shaki xagga qoraalka xirfadda ah sababtoo ah maaha sheeko baarayaal.
3 fikradda "qofka iyo maxay"
Si xun u adeegsiga "yaa -kaas" qoraal xirfadeedka ayaa ku wargeliya laba shay. Dhinaca kale, inaad qorto markaad hadlayso. Dhanka kale, inaad u janjeerto inaad jumladahaaga ka dhigto mid adag. Runtii, adeegsiga kee iyo taas odhaahda odhaahdu waxay u oggolaanaysaa in la calaamadiyo hakad ka hor inta aan mar kale weerarin. Haddii dareenkan, waxay ku caawin kartaa in la helo isgaarsiin dareere ah, qoraal ahaan waa natiijada ka soo horjeeda ee la helo.
READ Email template si aad raaligelin ugu noqoto kormeeraha
4 nooc oo ereyo ah oo loo xagliyo
Si ay u fududaato, ka door bidi erayga fudud kelmadda adag ee u baahan in dad badan loo furo qaamuus. Dunida xirfadeed waa deegaan wax ku ool ah, markaa ma jirto waqti lagu lumiyo. Si kastaba ha ahaatee, waa in la tixgeliyo tibaaxaha ama ereyada loo isticmaalo maalin kasta oo la qiimeeyo fursadahooda shaqo. Markaa, haddii aad la hadlayso macaamiisha ama dadka caadiga ah, waa inaad u turjumtaa hal -abuurkaaga xirfadeed adigoo adeegsanaya ereyada macnaha guud.
Dhanka kale, waa in aad door bidaysaa ereyo la taaban karo oo aad ka door bidayso ereyo aan la taaban karin, kuwaas oo macnahooda la qalloocin karo. Haddii aad leedahay ereyo la mid ah, door bido ereyo gaagaaban erayada dhaadheer.
5 nooc oo ereyada ah in laga fogaado
Noocyada ereyada la iska ilaalinayo waa ereyo aan loo baahnayn oo xad dhaaf ah. Marka aan loo baahnayn waxaa loola jeedaa dheeraynta aan loo baahnayn ee jumlad horeba cad ama isticmaalka laba eray oo isku mid ah isku mar si loo sheego wax la mid ah. Waxa kale oo aad fududayn kartaa jumladaha adiga oo isticmaalaya si firfircoon oo aanad isticmaalin qaabka dadban. Tani waxay ka dhigan tahay in aad qaadato qaabka "falalka mawduuca kaabista" oo aad iska ilaaliso dhamaystirka shayga intii suurtogal ah.
Shan talooyin si loo fududeeyo jumladahaaga Oktoobar 24th, 2021Tranquillus
horeANSSI waxay bilawday Kormeerka xirfadaha amniga interneedka
socdaIimayl si degdeg ah u baxa waxa uu u noqon karaa iimaylka khatarta ah qoraagiisa
Sidee si dhakhso ah u hagaajineysaa hingaadka dukumintigaaga, helitaanka software antidote.
Email template si ay u caddeeyaan daahitaan
Iimayl xirfad leh oo guuleysta wuxuu ku xiran yahay dhowr shuruudood
Dooro dhammaadka saxda ah ee jumladda emaylka, laakiin sidee baad u mareysaa?